Maaskaro la tuuri karo, Aaladaha Gargaarka Degdegga ah ee shaqeeya ee badan, Qalabka Duugista - Caafimaadka Baili
Warshadeenu waxay bixisa Maaskaro la tuuri karo, Aaladaha Gargaarka Degdegga ah ee ka shaqeeya Multi-function, Qalabka Duugista, iwm Waxaan qaadnaa tayo sare, qiimo jaban iyo adeeg qumman.
Qalabka Badbaadinta Gargaarka Koowaad ee Ujeedo Badan oo Badan oo loogu talagalay Kaamka
Qalabka Badbaadinta Gargaarka Degdegga ah ee Ujeedada Badan ee Casaan ee Camping waa qalab badbaado degdeg ah oo xirfad leh, oo ku qalabaysan boorsada gargaarka degdegga ah ee awoodda weyn leh, oo loo isticmaalo in lagu kaydiyo 50 qaybood oo ah qalabka badbaadada degdegga ah iyo sahayda degdegga ah. Ku fiican baabuur, doon, baaskiil, mootada, guriga, goobta shaqada, safarka, ugaarsiga, kaamamka, socodka, kalluumeysiga, doonista, baaskiilka, boorsada dhabarka, fuulista, baaskiilka buuraha, ciyaaraha dibadda, tacaburrada cidlada, si loo daboolo baahi kasta oo caafimaad ama degdeg ah.
Qalabka Badbaadinta Gargaarka Degdegga ah ee Ujeedada Badan ee Madow ee Camping
Qalabka Badbaadinta Gargaarka Degdegga ah ee Ujeedada Badan ee Black for Camping waa qalab badbaado degdeg ah oo xirfad leh, oo ku qalabaysan boorsada gargaarka degdegga ah ee awoodda weyn leh, oo loo isticmaalo in lagu kaydiyo 50 qaybood oo ah qalabka badbaadada degdegga ah iyo sahayda degdegga ah. Ku fiican baabuur, doon, baaskiil, mootada, guriga, goobta shaqada, safarka, ugaarsiga, kaamamka, socodka, kalluumeysiga, doonista, baaskiilka, boorsada dhabarka, fuulista, baaskiilka buuraha, ciyaaraha dibadda, tacaburrada cidlada, si loo daboolo baahi kasta oo caafimaad ama degdeg ah.
Qalabka Badbaadinta Gargaarka Degdegga ah ee Ujeedada Badan ee Camo ee Camping
Qalabka Badbaadinta Gargaarka Degdegga ah ee Ujeedada Badan ee Camo ee Camping waa qalab badbaado degdeg ah oo xirfad leh, oo ku qalabaysan boorsada gargaarka degdegga ah ee awoodda weyn leh, oo loo isticmaalo in lagu kaydiyo 50 qaybood oo ah qalabka badbaadada degdegga ah iyo sahayda degdegga ah. Ku fiican baabuur, doon, baaskiil, mootada, guriga, goobta shaqada, safarka, ugaarsiga, kaamamka, socodka, kalluumeysiga, doonista, baaskiilka, boorsada dhabarka, fuulista, baaskiilka buuraha, ciyaaraha dibadda, tacaburrada cidlada, si loo daboolo baahi kasta oo caafimaad ama degdeg ah.
Qalab Badbaadinta Gargaarka Koowaad oo Ujeedo Badan leh oo loogu talagalay Kaamka
Qalabka Badbaadinta Gargaarka Degdegga ah ee Ujeedo Badan leh ee Camping waa qalab badbaado degdeg ah oo xirfad leh, oo ku qalabaysan boorsada gargaarka degdegga ah ee awoodda weyn leh, oo loo isticmaalo in lagu kaydiyo 50 qaybood oo ah qalabka badbaadada degdegga ah iyo sahayda degdegga ah. Ku fiican baabuur, doon, baaskiil, mootada, guriga, goobta shaqada, safarka, ugaarsiga, kaamamka, socodka, kalluumeysiga, doonista, baaskiilka, boorsada dhabarka, fuulista, baaskiilka buuraha, ciyaaraha dibadda, tacaburrada cidlada, si loo daboolo baahi kasta oo caafimaad ama degdeg ah.
Shandad Qabo Gargaarka Degdegga ah ee Yar
Boorsada Gargaarka Degdegga ah ee Yaryar oo u qalabaysan si ay ugu habboonaato baahiyahaaga oo lagu hagaajiyo dhaawacyo kala duwan oo kala duwan iyo in dhammaan agabka gargaarka 1aad la soo ururiyo wakhti ka hor waxay kaa caawin doontaa inaad xakamayso daqiiqado lama filaan ah. Ay ku kalsoon yihiin qoysaska, badbaadayaasha, waalidiinta, ardayda, macalimiinta, kalkaalisooyinka, dhakhaatiirta, shaqaalaha dhismaha, darawallada baabuurta iyo xafiisyada ganacsiga xirfadlayaasha ah.
Boorsada Gargaarka Degdegga ah ee Cagaaran oo ay ku jirto 200 oo Cusbitaal oo Qalab Caafimaad ah
Boorsada Gargaarka Degdegga ah ee Cagaaran oo leh 200 oo Cusbitaal oo Qalab Caafimaad oo heersare ah loo diyaariyey si ay ugu habboonaato baahiyahaaga oo lagu hagaajiyo dhaawacyo kala duwan oo kala duwan iyo in dhammaan agabka gargaarka 1aad la soo ururiyo wakhti ka hor waxay kaa caawin doontaa inaad xakamayso daqiiqado lama filaan ah. Ay ku kalsoon yihiin qoysaska, badbaadayaasha, waalidiinta, ardayda, macalimiinta, kalkaalisooyinka, dhakhaatiirta, shaqaalaha dhismaha, darawallada baabuurta iyo xafiisyada ganacsiga xirfadlayaasha ah.